Waltajjiin Oromaaraa magaalaa Ambootti geggeeffamaa ture xumurame – Fana Broadcasting Corporate
Waltajjiin Oromaaraa magaalaa Ambootti geggeeffamaa ture xumurame
Finfinnee, Eebila 13, 2011(FBC)-Waltajjichi miira wal hubannaa fi walitti dhufeenya saba Amaaraa fi Oromoo cimsuun xumurame.
Gaaffiwwan bakka bu’oota saboota lamaanii irraa ka’aniifis qondaaltonni mootummaa naannolee lamaanii deebii itti kennaniiru.
Preezdaantiin itti aanaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wayituma kana akka jedhanitti, saboonni lamaan waggoottaniif wanta waliin dhaban qabu malee waan irratti wal dhaban tokkollee hin qabani jedhaniiru.
Kaleessa bilisummaa waliin dhaban argachuuf waliin ta’anii qabsaa’uu isaaniitiin guyyaan kun dhufeera. Kanaan ala olollii fi ajandaan jibbitootasaaniitiin faca’u ajandaa kanaan dura saboonni Amaaraa fi Oromoo waliif diina, abiddaa fi cidiidha jedhanii irratti hojjetaa turan ammas kaayyoo saanii ganamaa milkeeffachuuf xiyyeeffatanii hojjetaa jiru.
Seenaa fi dhugaa yeroo amma lafarra jiruun saboonni kunneen waldhabdee hin qaban kan jedhan Obbo Shimallis, ololli akka isaan hin raakneef of eeggannoo barbaachisu gochuudhaan hojiileen saboota kanaa fi kanneen naannoo biraa jiran waliinis mariin walitti dhufeenya saboota jajjabeessu yeroo yerootti gaggeeffamuu qabu.
Kanaan ala qaamolee saboota kana lamaan walitti rukuteen bu’aa argadha jedhee yaadu yoo jiraate mootummoonni lamaanuu araarama tokkollee hin qaban waan ta’eef olaantummaan seeraa ni kabajama.
Mirgi dubbachuu fi bilisummaa amma argame bilisummaa dubbii qaamolee garaa garaatiif carraa ta’eera, kanaaf namni kamuu hanga daangaa sarara diimaa tuqutti siranaan itti fayyadamuu qaba.
Kanaan ala sarara diimaa irra ejjennaan garuu olaantummaan seeraa ni kabajama jedhaniiru obbo shimallis.
Preezdaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dooktar Ambaachoo Makoonnan gama isaaniin, walitti dhufeenyi saboota lamaanii cimuun fedhii otoo hin taane dirqama.
Kunis biyyattii Ityoophiyaa jedhamtu kana isaan malee yaaduun hin danda’amu waa ta’ef, akkaataa baay’ina isaaniitiin qoodni ijaarsa biyyaa keessatti qaban olaanaa waan ta’eef tokkummaan isaanii biyya ijaara, gargar ba’uun ammoo biyya kana diiga jedhaniiru.
Saboonni lamaanuu ajandaa diinni bocee miidiyaa garaa garaatiin facaasuun miira keess otoo hin seenin tasgabbaa’ee dubbii ilaaluudhaan mootummaa kansaa ta’e kana cinaa dhaabbatee hojjechuu qabaas dhaamaniiru.
Kanaan ala mootummaan lamaanuu yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa waan qabaniif rakkoon isaan hin hiikne hin jiru jedhaniiru.
Walitti bu’iinsa naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo fi saba Amaaraa jidduutti tibba darbe mudatee ture ilaslchisee Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Dooktar Ambaachaw Makoonnan akka jedhanitti shira qaamoleen karaa qaxxamuraa aangoo qabachuuf barbaadan uumaan ta’uu ibsaniiru.
Kana booda ummatoonni lameen wal hubannaa fi duudhaa waliin jireenyaa jaarraa tokkoof kuufataniin ilaalchota akkanaa qolachuu akka qabanis dhaamaniiiru.